Amaphepha angama-35 aPhezulu aShicilekayo aMahala oMbala weDinosaur kwi-Intanethi - Amaphepha Okufaka Imibala:
Amaphepha emibala yezilwanyana
Amaphepha eBhayibhile afaka imibala
Abancedisi basekuhlaleni kunye nabantu
I-Monster kunye nabaphambukeli
Amaxesha kunye nemozulu
Ekhaya Amaphepha emibala yezilwanyana
ngoFebruwari 7, 2021
I-Dinosaur Face Umfanekiso amaphepha afaka imibala I-Dinosaur Face Umfanekiso amaphepha afaka imibala Pachycephalosaurus Dinosaur iphepha lombala Pachycephalosaurus Dinosaur iphepha lombala Iphepha le-Brachiosaurus dino lombala Iphepha le-Brachiosaurus dino lombala Iphepha lombala leCarnotaurus Iphepha lombala leCarnotaurus D yeDinosaur amaphepha ombala D yeDinosaur amaphepha ombala Ukudlala kweDinosaur Ngephepha lombala lomntwana Ukudlala kweDinosaur Ngephepha lombala lomntwana Amaphepha ombala we-Stegosaurus Dinosaur Amaphepha ombala we-Stegosaurus Dinosaur Idayinaso enephepha lemibala yespikes Idayinaso enephepha lemibala yespikes Idino ithi molo iphepha lokufaka imibala Idino ithi molo iphepha lokufaka imibala Amaphepha ombala wedayinaso aneempondo Amaphepha ombala wedayinaso aneempondo Amaphepha ombala weLystrosaurus Amaphepha ombala weLystrosaurus Amaphepha ombala we-Parasaurolophus dinosaur Amaphepha ombala we-Parasaurolophus dinosaur amaphepha ombala wedayinaso epinki amaphepha ombala wedayinaso epinki Amaphepha ombala wedayinaso anemigca Amaphepha ombala wedayinaso anemigca Triceratops Dinosaur amaphepha ombala Triceratops Dinosaur amaphepha ombala Amaphepha amabini ombala weDinosaur Amaphepha amabini ombala weDinosaur Umntwana kunye noMama weDinosaur enemibala yamaphepha Umntwana kunye noMama weDinosaur enemibala yamaphepha amaphepha ombala we-brontosaurus dinosaur amaphepha ombala we-brontosaurus dinosaur Corythosaurus dinosaur amaphepha ombala Corythosaurus dinosaur amaphepha ombala Amaphepha ombala weDinosaur yomntwana Amaphepha ombala weDinosaur yomntwana Dinoser Ngephepha lemibala yezihlangu (jonga upelo) Dinoser Ngephepha lemibala yezihlangu (jonga upelo) Amaphepha ombala oMntwana weDinosaur abomvu Amaphepha ombala oMntwana weDinosaur abomvu Amaphepha ombala weVelociraptor Amaphepha ombala weVelociraptor Amaphepha ombala we-Allosaurus Amaphepha ombala we-Allosaurus Imyuziyam yeMbali yeNdalo kumaphepha emibala yeDinosaur Imyuziyam yeMbali yeNdalo kumaphepha emibala yeDinosaur Amaphepha ombala we-Ankylosaurus Dinosaur Amaphepha ombala we-Ankylosaurus Dinosaur Amaphepha ombala weDimetrodon Amaphepha ombala weDimetrodon iphepha ledayinaso t rex lombala iphepha ledayinaso t rex lombala amaphepha ombala weDiplodocus dinosaur amaphepha ombala weDiplodocus dinosaur Iphepha lombala le-Brachiosaurus dinosaur Iphepha lombala le-Brachiosaurus dinosaur Iphepha lombala leMegalosaurus labantwana Iphepha lombala leMegalosaurus labantwana Amaphepha ombala wePteranodon Dinosaur Amaphepha ombala wePteranodon Dinosaur Amaphepha ombala weTheropod Dinosaur Amaphepha ombala weTheropod Dinosaur Amaphepha ombala we-Spinosaurus Amaphepha ombala we-Spinosaurus Giganotosaurus amaphepha ombala Giganotosaurus amaphepha ombala
Cocktails ezinesiqhamo uku-oda ebharini
Ngubani owathi iidinosaur zifile? Basajikeleza yonke indawo, belindile nje ekoneni. Ndimangalisiwe? Musa ukuba! Jonga ngeenxa zonke kwaye uya kuzibona kwimacaroni yomntwana wakho omncinci, iithoyi, iimpahla, ii-crackers, imiboniso yeekhathuni, izidlo kunye neemuvi azithandayo!
Ngokungafaniyo nento onokucinga ngayo, umntwana wakho uya kuba nomdla kuyo nantoni na enkulu, eyoyikisayo, enqabileyo, eyahlukileyo kwaye (ukusa kwinqanaba elithile) etshabaleleyo nayo! Izinto ezifana nezi ziya kutsala ingqalelo yakhe ngoko nangoko kwaye zibambe umdla wakhe ixesha elide. Ezi zezinye zezizathu ezinkulu zokuba kutheni, kwaye uninzi lwabantwana, bathande iidinosaurs.
Ukuba uziva ngathi uthando lomntwana wakho kwezi zilwanyana zikhulu yinto enqabileyo, cinga kwakhona. Abazali abasi-7 kwabali-10 baya kuvuma ngokungaguquguqukiyo ukuba abantwana babo badlule kwisigaba sedayinaso ebuntwaneni babo. Kubantwana, iidinosaurs aziyonto ingaphantsi kwephupha kwaye bayawathanda la maqumrhu angasekhoyo.
Uya kumangaliswa kukwazi inqanaba lothando lwe-dinosaur! Zininzi kakhulu iintlobo zeedayinaso kwaye kuninzi ekufuneka uzifundile malunga nazo, kunokuba yinto edinayo kwaye kube nzima ukuba umntwana wakho azikhumbule kwaye azikhumbule.
Amaphepha oMbala weDinosaur kuBantwana:
Indlela entle yokukhuthaza olu thando kwaye uvumele umntwana wakho onwabe kukusebenzisa ixesha lakhe lokufaka imibala-njengexesha lokufunda. Lo msebenzi ulula wokufaka imibala unokusetyenziselwa inzuzo yomntwana wakho.
Nanga amaphepha emibala yedayinaso yasimahla oza kuyiprinta ukuba umntwana wakho uyakonwabela ukufaka imibala kwaye uyakuwuxabisa njengomlinganiswa okhethekileyo:
1. Idayinaso yosana:
Eli lelona phepha ligqibeleleyo lombala wedayinaso ukuqala ngalo.
Ukuba umntwana wakho usemncinci kwaye usanda kwaziswa kwiidinosaurs, kucetyiswa kakhulu ukuba umvumele aqale aziqhelanise nezi zidalwa zitsha.
Nanku umfanekiso olula kodwa onomtsalane wedayinaso yosana. Isiphumo soopopayi somfanekiso siyakwenza ukuba ube nomtsalane kumntwana wakho.
2. Idayinaso yosana enoMama:
Lo mfanekiso wesibini ufanelekile kwabaqalayo.
Umfanekiso ubonisa usana lwedayinaso enemamma yedayinaso.
Lo mfanekiso unokuba yindlela entle yokunceda umntwana wakho afunde ngeekhonsepthi ezifana nobukhulu kunye nobudlelwane.
[Funda: Zoo Izilwanyana imibala Amaphepha ]
3. IDinosaur yoMntwana NgePen'/15-amazing-sea-animals-coloring-pages-31113440'> Amaphepha emibala yezilwanyana zaselwandle ]
5. Incwadi Yesikolo Idayinaso:
Lo mfanekiso wesihlanu ujonge ngqo kwiincwadi zesikolo zomntwana wakho.
Njengoko lo ingumfanekiso oqhelekileyo wedayinaso, umntwana wakho unokuwunxulumanisa kwangoko nezifundo azifundiswe ngutitshala wakhe esikolweni.
Usenokuphinda ubuyele kweso sifundo sinye kunye naye ngoxa usekhaya.
Ngelixa umntwana wakho ekonwabela ukufaka umbala kumfanekiso, unokuhlaziya inkumbulo yakhe kwaye uphinde wenze isifundo.
6. Idayinaso enezipikisi:
Lo mfanekiso ulandelayo ubonisa enye idayinaso yolunye uhlobo.
Olu luhlobo lwedayinaso ebizwa ngokuba ziiHadrosaurs.
Olu hlobo luchongwa ngempumlo yedada entloko.
Ungasebenzisa eli phepha lemibala kwaye ufundise umntwana wakho malunga nokuba iidinosaur ezahlukeneyo zahluke njani kwenye.
Unokumbonisa kwakhona indlela iimpawu ezithile zomzimba ezenza ngayo iidinosaurs ezithile zahluke kwezinye.
Ezi mpawu zikhethekileyo zinokwenza indlela enkulu yokuba umntwana wakho akhumbule amagama abo.
7. Iidayinaso ezimbini:
Nanku omnye umfanekiso omangalisayo wohlobo olwahlukileyo lwedayinaso.
Lo mfanekiso ufuna iinkcukacha ezincinci ngelixa ufaka imibala ukuze uncede umntwana wakho aqonde kunye nezakhono zemoto.
Umfanekiso ubonisa uhlobo lwee-Ankylosaurs kwaye zichongwa ngezikhonkwane zazo ezibukhali.
[Funda: Amaphepha oMbala wembovane ]
8. IiDinosaurs eziPinki:
Lo ngomnye umfanekiso obalaseleyo wokunceda umntwana wakho aqonde ingqikelelo yomahluko.
Oku kuya kunceda umntwana wakho aqonde ukuba kunokubakho iintlobo ezahlukeneyo zeedayinaso ezahlukeneyo, kodwa zijongeke ngendlela efanayo.
Imifanekiso ayichazwanga kakhulu kuba imbono kukwenza umntwana wakho aqonde malunga neentlobo ezahlukeneyo.
9. Umntwana kunye noMama weDinosaur:
Lo mfanekiso ulandelayo ngumfanekiso weStyracosaurus, olunye uhlobo olumangalisayo lwedayinaso.
Umfanekiso ubonisa, usana kunye ne-mamma dinosaur kunye.
Iimpawu ezahlukileyo zolu hlobo lwedayinaso ziya kuyenza ibe nomtsalane kumntwana wakho ukuba ayifake umbala kakuhle.
[Funda: Amaphepha emibala yezilwanyana zasendle ]
10. Idayinaso eneempondo:
Umfanekiso wokugqibela ubonisa i-Afrovenator Abakensi dinosaur.
Olu hlobo lwaluchongwa ngokubanzi ngamazipho amathathu, lwalunalo esandleni ngasinye.
Oku kwenzeka ukuba ngomnye weyona mifanekiso ibonwa ngokubanzi yeedinosaurs.
Umntwana wakho unokukhumbula ebona ezi kolunye lwemidlalo bhanyabhanya yeJurassic Park.
Shumi elinanye. Amathambo eDinosaur kwiMyuziyam yeMbali yeNdalo:
Abantwana bayakuthanda ukutyelela imyuziyam nokutyelela imiboniso bemangalisiwe. Abazali bafanele babase emyuziyam rhoqo ukuze bafunde ngoko kwenzeka kwixesha elidlulileyo. Kuba abantwana bakho benomdla wokwazi ngezilwanyana unokubabonisa iifosili ezinkulu zedayinaso kwiMyuziyam yeMbali yeNdalo kwaye ubaxelele ngembali yeedinosaurs. Indlela ababephila ngayo kumaxesha angaphambi kwembali kunye nendlela eyaphela ngayo. Ungabonisa abantwana bakho imifanekiso yeentlobo ezahlukeneyo zeedayinaso ezazikho kumaxesha angaphambi kwembali, kwaye ubaxelele into abayityileyo kunye nendlela ezi dinosaur zasinda ngayo.
[Funda: Amaphepha oMbala eKati weHalloween ]
I-Apatosaurus ikwabizwa ngokuba yiBrontosaurus, yeyosapho lwe-sauropod dinosaur eyayiphila kwi-150-154 yezigidi zeminyaka eyadlulayo ngexesha leJurassic. Yayisesinye sezona zilwanyana zikhulu zakha zaphila emhlabeni. Umndilili womphakamo webrontosaurus wawuziimitha ezingama-23 (75ft) kwaye inobunzima obumalunga neetoni ezili-16 zeemetric. Amathambo eBrontosaurus afunyanwa kwiNine Mile Quarry kunye neBone Cabin Quarry eWyoming, kwiziza eColorado, e-Oklahoma naseUtah.
phawula ukuba inja iyabeleka
I-vertebrae yomlomo wesibeleko yeBrontosaurus yayincinci kwaye yakhiwe kakhulu kuneDiplodocus. Amathambo omlenze ayenesitokhwe nangona ede, oku kwangqina ukuba iBrontosaurus yayisisilwanyana esomeleleyo. I-Brontosaurus ithwala umsila wayo ngaphezu komhlaba ngexesha lokuhamba. Njengazo zonke ii-sauropods, iBrontosaurus inozipho olukhulu kumlenze ngamnye wangaphambili kunye neenzwane ezintathu ezineenzipho kwilim yangasemva.
Igama lokwenyani leBrontosaurus lithatyathwe kwigama lesiGrike elithi ‘apatelos’ elithetha inkohliso kunye nesauros elithetha ‘icilikishe’.
Ungaxelela umntwana wakho omncinci ezi trivia malunga neBrontosaurus ukwenza iseshoni yombala ibe mnandi kwaye ifundise.
[Funda: I-Dragon Tales Coloring Pages ]
I-Corythosaurus luhlobo lwedayinaso ehlawuliweyo yedada eyayiyeyexesha le-Upper Cretaceous. Idayinaso yayikho ebusweni boMhlaba kwiminyaka ezizigidi ezingama-77 eyadlulayo. Igama elithi Corythosaurus lithatyathwe kwisiGrike, elithetha ‘icilikishe elinesigcina-ntloko’. Igama kunye nenkcazo yale dayinaso yanikwa nguBarnum Brown ngo-1914.
Kulula ukubona isampuli ye-corythosaurus evela kumathambo ngenxa yeecrests ezinde. Kukholelwa ukuba i-crest yanceda ekukhuliseni amagama. Umoya owawusetyenziselwa ukudlula kumagumbi ahlukeneyo e-crest kwaye wawuya kunyuka xa i-corythosaurus iphuma. Onke amathambo eCorythosaurus afunyanwa anokutya okugcinwe kumqolo wesifuba. Oku kusinika ubungqina bokuba le dayinaso yayineenaliti ze-conifer, imbewu, isetyana kunye neziqhamo. Ngokungathandabuzekiyo yayibonakala isoyikeka, kodwa ayizange ibenzakalise abantu!
Iintlobo ze-Lystrosaurus zeDinosaur zezosapho lwe-dicynodont therapsids. Yayiphila ngexesha langaphambili lePermian kunye nexesha eliphakathi kweTriassic elaqala malunga ne-250 yezigidi zeminyaka eyadlulayo. I-Lystosaurus ikwimimandla ngoku eyaziwa ngokuba yi-Antarctica, i-Indiya kunye noMzantsi Afrika.
I-Lystosaurus yayinamazinyo amabini kuphela, ibini lamabamba afana neecanine. Kusenokwenzeka ukuba yayinomlomo weempondo owawunceda ukukrazula uhlaza. I-lystosaurus sisilwanyana esitya utyani esakhiwe kakhulu kwaye simalunga nesayizi yehagu. Ubume begxalaba kunye namalungu esinqe, njengoko kufunyenwe ngexesha lophononongo lwamathambo olwenziwa ziingcali, lucebisa ukuba idayinaso ishukume ngokugxagxamisa kancinci. Imilenze yangaphambili yomelele ngakumbi kunangemva. ULystosaurus babengabembi abakhulu kwaye babehlala emingxunyeni.
I-Lystosaurus yayinamandla kakhulu kwaye uhlobo lomzimba wabo lwabanceda ukuba baphile kwiimeko eziguqukayo zomoya ngexesha lokuphela kwesiganeko sePermian-Triassic. Lo mfanekiso ubonisa idayinaso inobungozi kodwa ayizange ihlasele nawuphi na umntu okanye ezinye izilwanyana. Bubukhulu obupheleleyo kunye nolwimi olubethayo olwenze uloyiko.
[Funda: INgonyama yoKumkani Amaphepha oMbala ]
Shumi elinantlanu. I-Allosaurus:
I-Allosaurus yi-theropod dinosaur enkulu eyayiphila kwi-155 ukuya kwi-150 yezigidi zeminyaka eyadlulayo, ngexesha leJurassic Period. Igama elithi Allosaurus lithetha ‘icilikishe elahlukileyo’ kwaye likwavela kwisiGrike. I-Allosaurus ihlelwa njenge-allosaurid, uhlobo lwe-Carnosaurian theropod dinosaur.
indlela yokuba ngumdlali weqonga weDisney
I-Allosaurus lirhamncwa elinesibini. Bukela nayiphi na ifilimu yeDinosaur efana neJurassic Park kwaye unokubona iAllosaurus enye apho! Yayinokakayi olukhulu olunamazinyo abukhali, anele ukwenza igazi lakho lijike. Inokuba yi-8.5m (28ft), nangona kunjalo uphando oluqhekezayo lubonisa ukuba i-Allosaurus yayinokuba yi-12 yeemitha (39ft). Imilenze yangaphambili eneminwe emithathu ibimancinci xa ithelekiswa namalungu angasemva amakhulu kwaye anamandla. Umzimba ulungelelene ukusuka kumsila onzima onezihlunu.
I-Allosaurus yayiyingozi ngokwenene njengoko yayizingela ezinye iidinosaur ezitya utyani kunye nezinye izilwanyana. Awona maxhoba aqhelekileyo ohlaselo lwe-Allosaurus aye
Ii-Ornithopods, stegosaurids, kunye ne-sauropods. Iipaleontologists zahlulwe ngokoluvo lwazo malunga nokuziphatha kwe-Allosaurus, abanye bakholelwa ukuba babenentsebenziswano ekuhlaleni ngelixa bezingela ngeepakethe, abanye abaninzi bacinga ukuba i-Allosaurus yayinobundlongondlongo kwaye isitya kwinyama enye. Mhlawumbi, i-Allosaurus yahlasela ixhoba kwindawo yokulalela, isebenzisa umhlathi wabo ongezantsi njenge-hatchet.
Lo ngumfanekiso osondeleyo wedayinaso kwaye ungawuqhobosha kwigumbi lomntwana wakho emva kokuba egqibile ukuyifaka umbala. Ukuba umntwana wakho ebebukele iJurassic Park sele eyithanda imovie ungabhala iJurassic Park ngezantsi komfanekiso.
Akwaziwa ukuba loluphi uhlobo lwedayinaso le, kodwa iincani zayo ezibukhali zibonisa ukuba kusenokwenzeka ukuba yayisisidlwenguli okanye isilwanyana esizidlayo. Ngokuqhelekileyo sinxulumanisa zonke iidinosaurs njengezilwanyana ezidliwayo, akuyonyani, kodwa ukuvala le dinosaur kuqinisekisa ukuba yayinokuba yizilwanyana ezizingela igazi kwixesha langaphambili.
[Funda: Izilwanyana zeJungle zamaphepha anemibala ]
17. UDino uthi Molo:
Le Dino, nangona inamazinyo abukhali, ibonakala ithandeka! Umncinci wakho uya kuthanda ukufaka umbala kule dino inobubele ithi molo. Umntwana wakho uya kubabala amabala kunye neecrests ngemibala eyahlukileyo. Intelekelelo yakhe iya kubhabha isibhakabhaka phezulu xa efaka imibala kule dayinaso.
Le dayinaso ijongeka inobuhlobo kancinci kwaye i-snarl yayo ibonakala njenge-grin ebanzi.
I-Triceratops ithathwe kwigama lesiGrike, elithetha iimpondo ezintathu ezijongene ne-dinosaur. Yeyosapho lwe-herbivorous ceratopsid dinosaur. Yaqala ukuvela eMhlabeni ngasekupheleni kweMaastrichian s'/25-cute-goat-coloring-pages-3117612'> Iibhokhwe zemibala yamaphepha ]
Igama elithi Parasaurolophus lithetha 'kufuphi ne-crested dinosaur'. Luhlobo lweDinosaur yeOrnithopod eyayiphila ngexesha leCretaceous Period. Iifosili ezininzi zeParasaurolophus zibonisa ukuba zazihlala kwindawo ngoku eyaziwa ngokuba nguMntla Merika.
I-Parasaurolophus zombini yayibhidlwe kwaye ine-quadruped. I-Parasaurolophus yayiyi-hadrosaurid, inxalenye yentsapho eyahlukeneyo yeedinosaurs zaseCretaceous ezaziwa ngoluhlu lwazo lweentloko ezingaqhelekanga. Yayinecrest enkulu yecranial kunye netyhubhu ende egobileyo ejonge phezulu ukusuka ngasemva kokakayi.
Indlela yokubhala ileta yokuqhekeka
I-Charonosaurus yase-China, ekusenokwenzeka ukuba yayisisihlobo sayo esisondeleyo, yayinokakayi kunye ne-crest efanayo. Luhlobo olunqabileyo lwehadrosaurid.
Amashumi amabini. IVelociraptor:
IVelociraptor luhlobo lwe-Dromaeosaurid theropod dinosaur eyayiphila malunga ne-75 ukuya kwi-71 yezigidi zeminyaka eyadlulayo ngexesha lexesha elizayo leXesha leCretaceous.
I-velociraptor idlale indima ebalulekileyo kuthotho lwemiboniso bhanyabhanya yeJurassic Park asenokuba sele eyijongile umntwana wakho. Uya kuba nako ukuyibona le dayinaso ngoko nangoko! I-velociraptor yinyama edla inyama eneentsiba ezimbini enomsila omde. Inozipho olude olumile okwerhengqa elizingela ngalo ixhoba. IVelociraptor inokwahlulwa kwenye iDromaeosaurid ngokhakhayi lwayo olude noluphantsi kunye nempumlo ejikile.
Ungaxelela umntwana wakho ezi nkcukacha zinika umdla malunga nale dayinaso xa efaka umbala kumfanekiso. Uya kukuphulaphula emangalisiwe ngezi zidalwa zingasekhoyo wazibona eJurassic Park zihlasela abantwana abancinci. Ungamxelela ukuba ibali lefilim liyintsomi eneneni iidinosaur azizange zibulale abantu, kuba abantu babefana neenkawu zamandulo ezizimele emiqolombeni. Babengenabo nobuhlobo njengedayinaso kuthotho lweekhathuni ezidumileyo iFlintstones.
amashumi amabini ananye. I-Pachycephalosaurus:
I-Pachycephalosaurus luhlobo lwe-pachycephalosaurid dinosaurs. Uhlobo lweentlobo, i-P. wyomingensis, kuphela kweentlobo ezaziwayo. Yayiphila ngexesha leXesha leCretaceous lamva lendawo ngoku eyiMntla Melika. I-Pachycephalosaurus ngesiGrike ithetha 'icikilishe elinentloko eshinyeneyo'.
I-Pachycephalosaurus yayinokakayi olunye olunophahla lokakayi olungqindilili, oluboniswe kulo mfanekiso ungezantsi. Kusenokwenzeka ukuba yayiyi-herbivore okanye i-omnivore. Yayiludidi lokugqibela lwedayinaso engeyiyo eyentaka phambi kwesiganeko sokuphela kweCretaceous–Paleogene. Enye i-dinosaur, iTylosteus yasentshona yeNyakatho Melika, ifaniswe nePachycephalosaurus. Yayinamalungu amade angasemva kunye namafutshane ngaphambili.
[Funda: Amaphepha oMbala weentlanzi zaseTropiki ]
I-Carnotaurus luhlobo lwe-dinosaur enkulu ye-theropod eyayihlala eMzantsi Melika ngexesha le-Late Cretaceous, phakathi kwe-72 kunye ne-69.9 yezigidi zeminyaka eyadlulayo. Ekuphela kweentlobo zeCarnotaurus sastrei. Igama elithi 'carnotaurus' lisuka kwiLatini elithetha inyama yenkomo. ICarnotaurus lilungu elithatyathwe kwi-Abelisauridae, iqela lee-theopops ezinkulu ezithathe indawo enkulu ye-predatorily niche kumazantsi eLandmasses e-Gondwana ngexesha lasemva kwexesha le-Cretaceous. Izihlobo zayo ezisondeleyo yiMajungasaurus okanye iAucasaurus.
I-Carnotaurus yakhiwe kancinci, i-bipedal predator, ilinganisa i-8 ukuya kwi-9 m (26 ukuya kwi-30 ft) ubude kwaye inobunzima ubuncinane be-1 metric ton. Yayineempondo ezingqindilili phezu kwamehlo nto leyo eyayisenza yahluke kwezinye iidinosaur ezidla inyama. Yayinemilenze emincinane yangaphambili kunye namalungu angemva abhityileyo. Yayinokakayi obunzulu nentamo enezihlunu. Yayingenantsiba kodwa yayinomfanekiso owenziwe nge-mosaic wezikali ezithe kratya ezilingana ne-5mm ububanzi. Iimpawu ezibonakalayo ze-carnotaurus zenze ukuba ibe yi-theropod ekhethekileyo kunye nekhethekileyo. I-Carnotaurus nathi iimpondo zakhe njengezinto eziphazamisayo xa ehlasela abachasi bakhe ngentloko ecothayo okanye ukubetha.
23. D yeDinaso:
Ungafundisa umntwana wakho ukuba igama elithi idayinaso liqala ngonobumba u-d. Mbonise indlela yokubhala amagama amakhulu namancinane d.
Le dayinaso ikhangeleka intle inamachokoza epolka kunye nezikhonkwane. Uyayibona nale dino incumile! Umntwana wakho uya kukonwabela ukufaka imibala kule dayinaso kwaye enze le seshoni yokufaka imibala ibe luncedo kwaye ibe namava okufunda atyebisayo.
24. Idayinaso enemigca:
Le dayinaso inemigca ibonakala ingaqhelekanga ngenene. Inamazinyo abukhali, ngoko ke kufuneka ukuba ibe lirhamncwa eliyingozi. Ungothuki xa umncinci wakho efaka umbala kulo mfanekiso usebenzisa imibala eyahlukileyo, inokuthi ibe yidayinaso ebukekayo enemibala emininzi engazange ihambe ebusweni bomhlaba! Ewe, yindlela abantwana abangenatyala ngayo, baya kubala imifanekiso ngokweminqweno yabo kwaye unokuhlala phantsi kwaye ujabulele ukuhleka okuncinci. Qiniseka, uyamcacisela umntwana wakho ukuba iidayinaso azikho mibala mininzi njengoko kubonisiwe kwiikhathuni. Unokubabonisa imifanekiso okanye iidayinaso kwi-intanethi ukuze ubabonise owona mbala wedayinaso. Nangona umbala wedayinaso wawungohluka ukusuka kolunye uhlobo ukuya kolunye kodwa ubukhulu becala yayimdaka okanye ngwevu bumdaka ngebala lomnquma kunye nomnyama.
25. UDino Unxibe Izihlangu:
Lo ngumfanekiso ogqibeleleyo wedayinaso enxibe iibhutsi. Lo mfanekiso uhlekisa kakhulu, umntwana wakho uya kuvuya ukuwufaka umbala. Ngokuqinisekileyo uya kunika i-grin ebanzi xa ebona i-dino enxibe izihlangu ze-canvas, kanye njengokuba esenza xa esiya kudlala. Le dino encinane nayo idlala ngokucofa iminwe yakhe. Pina lo mfanekiso wedayinaso kwigumbi lokulala lomntwana wakho xa egqibile ukuwufaka umbala.
Ixesha lemibala linokwenziwa libe mnandi kwaye libe nolwazi ngokwabelana ngolwazi malunga nedayinaso nganye. Kungcono ukumbonisa amathambo edayinaso kwimyuziyam, usenokungaqondi yonke into kodwa ngokuqinisekileyo uya kuthanda ukubona loo mathambo makhulu. Yindlela entle yokubaxelela ngezi zilwanyana zangaphambili. Unako kwakhona uphando ezi zilwanyana nomntwana wakho kwi-intanethi ukuze ufumane inkcazelo engakumbi. Ungalibali ukuqhobosha la maphepha emibala xa umntwana wakho egqibile ukuwafaka imibala ukuze azive ukuba umsebenzi wakhe uxatyiswe!
Ngeentlobo ezininzi zeedinosaurs, kunzima nakubantu abadala ukukhumbula amagama abo. Ngokuqinisekileyo akunakwenzeka ukuba umntwana wakho enze njalo. Kungcono ukuvumela umntwana wakho aqonde malunga nesiseko sakhe, iimpawu kunye neempawu ngokubanzi.
Musa ukugxininisa ekukhumbuleni nganye nganye ngegama layo. Ngokuthe ngcembe, njengoko umntwana wakho ekhula, uya kufunda oko kufuneka akwenze. Sebenzisa ixesha lakhe lokufaka imibala ngokumenza aqhelane ngakumbi nolu didi lwezilwanyana. Mvumele ayonwabele le mifanekiso yedayinaso ayifake imibala.
Ndiyathemba ukuba umntwana wakho uyonwabela la maphepha aprintwayo edayinaso asimahla. Yenza umsebenzi wabo emva kokuba begqibile ukufaka imibala. Kwakhona sixelele ukuba yeyiphi kwezi umntwana wakho akonwabele ukufaka imibala kakhulu. Kwaye njengento yokuzonwabisa, jonga iimuvi ezimbalwa zedayinaso kunye!
INKCAZELO: Yonke imifanekiso efunyenwe apha ikholelwa ukuba 'kwidomeyini yoluntu'. Asizimiselanga kunyhasha naliphi na ilungelo lengqondo elisemthethweni, amalungelo obugcisa okanye ilungelo lokushicilela. Yonke imifanekiso ebonisiweyo yeyemvelaphi engaziwayo. Ukuba ungumnini ofanelekileyo wayo nayiphi na imifanekiso / amaphephadonga afakwe apha, kwaye awufuni ukuba iboniswe okanye ukuba ufuna ikhredithi efanelekileyo, nceda uqhagamshelane nathi kwaye ngokukhawuleza siya kwenza nantoni na efunekayo ukuze umfanekiso isuswe okanye ibonelele ngetyala apho kufanelekile. Yonke imixholo yale sayithi ikhululekile kwaye ngoko ke asizuzi nayiphi na inzuzo yemali ekuboniseni okanye ukukhuphela nayiphi na imifanekiso / iphepha lodonga.Ezi thebhu zimbini zilandelayo zitshintsha umxholo ongezantsi.
Ekujoliswe Kukodating Uyilo Lokulala Dsigns Ukutya Amagama Abantwana Uqeqesho Lwepotty
Ungadibanisa ntoni ne-malibu coconut rum
ubhuti omncinci ucaphula kudade omkhulu
indlela yokususa amabala amadala kwiingubo zendalo
lithetha ntoni ikhandlela elibomvu
ukuba mandithini ukuthuthuzela umntu
Uluhlu lwemibuzo engacwangciswanga ewe okanye hayi